Kaabta Your Xiriirada Android inay Gmail Si fudud
> Resource > Android > Sida loo kaabta Xiriirada Android inay Gmail
Ma leedahay la joogo in aad walwalo ammaanka xiriirada telefoonka aad Android. Eegeyn in uu noqdo mid dhab ah, waxaa dhici karta inaad door bidaan in ay xiriir gurmad telefoonka Android inay Emails ama si aad u computer haddii ay dhacdo wax ka baxsan fikirka ah, khasaaraha incautious tusaale ahaan. Haddii aad raadinayso si ay u xiriirada Android gurmad in Gmail, waxa laga yaabaa inaad xiisaynayso oo ku faraxsan marka ay jirto waa tababaraha sida telefoonka Android - Wondershare MobileGo for Android (Windows) ama Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) .
Wondershare MobileGo for Android Si dadban dhaqaaqi karaan xiriirada ka Android inay Gmail, kaas oo gebi ahaanba idinka Koriya ka baqaya ee khasaaraha ka mid ah xiriirada. Dhammaan waxa aad u baahan tahay waa in ay ku rakibi oo raac talaabooyinka hoos ku qoran. Waxaa kugu hagi doona sida loo sameeyo waa talaabo talaabo ah.
Talaabooyinka Easy in Xiriirada Android kaabta in Gmail
Fiiro gaar ah: Tallaabooyinka hoos ku isticmaalka Wondershare MobileGo for Android Screenshot version Windows. Habka in gurmad aad xiriirada Android inay Gmail on Mac dhow waa isku mid. U hubso in aad kala soo bixi version saxda ah.
Tallaabo 1: Ku rakib iyo abuurtaan MobileGo
Si aad ula bilowdo, rakibi MobileGo on your computer. Markaasaa waxaa u ordo. Connect telefoonka aad Android si aad u computer via cable USB ama via Wi-Fi (Waxaad kaliya Wi-Fi isticmaali kartaa la version Windows.). Marka telefoonka aad Android xiran yahay, MobileGo qalabayn doono si ay u ogaado.
Fiiro gaar ah: Dhab ahaantii, Wondershare MobileGo for Android taageertaa badan oo telefoonada Android iyo murriyado, sida HTC, Samsung, Acer. Waa hagaag, guji Qalabka More si aad u hesho liiska qalabka Android taageeray.
Talaabada 2: xiriirada Dhoofinta ka Android inay PC
Guji "Xiriirada" khaanadda bidix ee suuqa hoose. Markaad u timaadaan inaad suuqa kala xiriiro, waa in aad doorato xiriirada in aad rabto in aad u dhoofiyaan. Guji "Import / Dhoofinta"> "dhoofiyo oo dhan xiriirada in computer" ama "Dhoofinta xiriir la doortay si ay u computer"> "si file vCard".
Talaabada 3: xiriirada Android kaabta in Gmail
Gasho xisaabtaada Gmail. Guji "Gmail" bidixda ee bogga ugu weyn iyo dooro "Xiriirada". Dhammaan xiriirada aad Gmail ku qoran yihiin waxay xaq u. Guji "More". In ay liiska hoos-hoos, guji "Import". Markaas, marka uu furmo suuqa sida hoose wuxuu muujinayaa booda, guji "Dooro File". Dul meeshii aad badbaadin xiriirrada dhoofiyo oo guji "Open" .Ka in, guji "Import".
Marka laga reebo taageero ilaa xiriirada in Gmail, waxaad la mid tahay awood u dhoofiyaan xiriirada in Outlook Express, Windows Live Mail, Windows Cinwaanka Book, Muuqaalka 2003/2007/2010, iyo dib u soo celinta xiriir si telefoonka aad Android ka dib markii iyaga laga badiyay. Sidaas darteed, tababaraha this Android runtii dhergiyaa awoodo aad u baahan tahay kala duwan.